I-Stylish Garden Flat endaweni Ehambayo yama-Victorian - I-Airbnb
I-Stylish Garden Flat endaweni Ehambayo yama-Victorian
Oakland, California, i-United States
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Rebecca
Buyisela umuzwa wakho wobuciko kuleli fulethi elibanzi, eligcwele ukukhanya e-Oakland ethule, ehamba phambili. Inefenisha enhle nobuciko kuyo yonke indawo, ubhavu we-clawfoot, izici ze-Victorian, kanye nekhishi eligcwele ngokugcwele, leli fulethi elinokuthula, eligcwele ilanga liyisiphephelo esiphelele sesihambi esicolisisiwe.
Inekamelo lokulala elilodwa elinombhede olingana nendlovukazi, indawo yokudlela yezivakashi ezingu-4-6 kanye nekhishi elisanda kulungiswa elinempahla yensimbi engagqwali, leli fulethi elibanzi elinamagumbi amahlanu linikeza indawo yokulala eyengeziwe kwababili kusofa ogoqiwe egumbini lokuhlala.
Isibuyekezo se-Covid-19: bona Imithetho Yendlu ukuze ufunde zonke izinyathelo zokuphepha esizithathayo.
Inekamelo lokulala elilodwa elinombhede olingana nendlovukazi, indawo yokudlela…
4.98 (izibuyekezo ezingu-53)
Indawo eyakhelene nayo inomndeni futhi igcwele ama-Victorian amahle amadala. Uma unemoto, kulula kakhulu ukuthola indawo yokupaka ngaphambi noma eduze kakhulu nekhaya. Kuqhele ngebhlokhi elilodwa ukusuka eBella Vista Park, 20 min walk (5 min drive) ukuya eLake Merritt, Lakeshore Avenue kanye neGrand Lake Retail District. Imigqa yamabhasi eminingi (kufaka phakathi ibhasi labagibeli be-SF eliqondile) phakathi nohambo lwemizuzu emi-5 olunikeza ukufinyelela okulula eLake Merritt noma i-19th Street BART.
Imizuzu engu-45 oyihamba ngemoto uma ukuminyana kwezimoto kungekho emgwaqeni